Ilbaxnimada iyo Legdenka Bariga dhexe | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxa ilbaxnimada la yidhaahdo iyo korranaanta garaadka iyo wacyiga dadnimadu ka ma soo hadho. Bariga Dhexe afar isir baa ku legdamaya, sida ay u ka la ilbaxnimo korran yihiin bayna u ka la adkaadeen. Waa Carab, Eeraan, Turki iyo Yuhuud. Afartu sida ay u ka la ilbaxnimo horreeyaan ayay u gu ka la fursad badan yihiin in ay badbaadaan oo guulaystaan.
Eeraan waagii kacaanku ka dhashay ilaa maanta waa aynnu og nahay waxii dagaal dhan walba ah la la soo galay si kacaankooda iyo aragtidiisa loo dumiyo, waxaana isu gaashaanbuursaday Carab, Yuhuud iyo Caddaan. Waa se la loodin waayay oo waa taa maanta la wada hoos yaacayo, kol ay Maraykan ku tahay, ama la ga wada baqayo. Tamartaa waxaa siisay ilbaxnimada fog ee ay ku fadhiyaan.
Yuhuudi cadawgeedii Carbeed iyada oo aan xabbad ku ridin bay ciidda cunsiisay. Suuriya oo u gu darrayd xaalkeeda waad aragtaan, Ciraaqna halkii ay ku dambaysay waa aynnu ogayn. Beri dhowna kolka Aal Sacuud dadkoodu ku kaco in ciidan Yuhuudeed u gurmado, oo Kacbada ku ilaaliyo, oo muslinka ka difaaco, ha sugi waayin, Ilaahay ka ma dhigee.
Turkigu muddo qarni ku dhow ayuu dabkiisu gamaarsanaa oo ilbaxnimadiisu shiiqsanayd, oo ahaa “ninka Yurub ee buka” sidii ay taariikhdu qortay. Waa kaa caafimaaday ee dardar iyo xawli cusub la yimid ee maanta loo wada hamraday. Toddoba qarni oo dawladnimo ah ayay ku fadhiyaan.
Carabtu, haddaba, weligeed ilbaxnimo ma ay yeelan. Diinta Islaamka ee ay dunida gaadhsiisay heerka caqiidada oo qudha ayay ahayd, laakiin ummado kale ayaa ilbaxnimadeeda maaddiga ah curiyay. Muslinkii culuunta maaddiga ah soo saaray 99% cajam ayay ahaayeen ee Carab ma ahayn. Fikirka iyo hab-dhaqanka ninka carbeed weligii ilaa maanta ka ma soo guurin lamadegaankii uu badawga ku ahaa Islaamka ka hor. Taas baa maanta dawladnimadooda iyo dhaqankooda oo dhan ka muuqata. Waxa ay la wada waalan yihiin ee isu wada rifayaan waa sababtaas. Hadal, gabay, faan iyo faataadhug aan hal iyo awr toonna u ga cabbayn bay is la dhex wareegayaan.
Macalin Ibraahin-hawd Yuusuf